Iibso Ubax Kala Duwan oo Gacan -ku -samays ah Shaah Ubaxaysa - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Goobta Asalka: fu zhou, Shiine
Waqtiga Dalagga: Guga Hore 2021
Farshaxanka: Gacan lagu sameeyay.
Waqtiga kaydinta: 36 bilood
Waa Maxay Shaaha Ubaxa
Ubaxa Shaaha waxaa lagu farsameeyay burooyin shaah cagaaran ah iyo ubax la qalajiyey oo la cuni karo. Waxay dhigtaa ubaxyo la qallajin karo oo la geliyo burooyinkii shaaha si ay u noqdaan kubad shaah oo yar, oo ku dhalaalaysa udugga shaaha iyo quruxda ubaxa. Ku shubista biyo kulul galaaska muddo hal ama laba daqiiqo ah, kubbadda shaaha ee wareegsan ayaa si qurux badan u soo baxda, si ay u noqoto ubax qurux badan oo isku duuban oo leh burooyinkeeda shaaha cagaaran. Waa dabiici, caafimaad, iyo moodada.
waad ku mahadsan tahay adeegga weyn x
Bixinta urengo-66 maalmood oo cusub, Ruushka 10 maalmood.
Badeecadaha ayaa loo raadiyay sidii wax la yaab leh. Horeba wuu u yimid, oo wuxuu ku socdaa wadada kaliya ee xadka. Si aad u hesho shaah ma laha waxyaalo, sida caadooyinka. Laga jaray in lagu qasbay inay bixiyaan warqadaha gudbinta, in kasta oo markii hore la bixiyay markii la dalbanayay ... Guud ahaan, shaah waa 5 *